Izinto ongazenza nomlingani wakho: okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ndawonye | Amadoda aSitayela
IsiJalimane Portillo | 01/06/2021 09:11 | Izithandani Nezocansi
Uma ukulingani wakho kunezimo lapho ungazi ukuthi wenzeni ukuze uzijabulise wazi okuthile kwezothando. Ikakhulukazi lapho ubuhlobo buqala, kunezimo, mhlawumbe, ezingeke ziphindwe ngoba zihlukile futhi zinomlingo. Kunezinkulungwane ze- izinto zokwenza nomlingani wakho ukujabula ndawonye nokuqinisa izibopho zokwethembana.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izinto ezinhle kakhulu ongazenza nomlingani wakho.
1 Izinto okufanele uzenze nomlingani wakho ngendlela ephoqelekile
2 Yabelana ngezinto zokuzilibazisa nezikhathi
3 Izinto ongazenza nomlingani wakho: yakha ukwethembana
Izinto okufanele uzenze nomlingani wakho ngendlela ephoqelekile
Uma sithi ngendlela eyisibopho sithi kungumsebenzi ojwayelekile njengalowo ngokusho kwempilo yakho. Enye yazo ipheka ndawonye. Okuhlangenwe nakho kokupheka ndawonye kungenye yezinto ezicebisa kakhulu ebudlelwaneni. Izimo zivame ukusungulwa lapho ungakwazi khona qinisa izibopho eziningi ngokuba namandla, ubumnandi futhi ugcwele umdlandla.
Njengoba sishilo ekuqaleni kwendatshana, kunezimo eziyohluka uma usuhlale isikhathi eside nomlingani wakho. Enye yezinto okufanele uyenze nomlingani wakho, ikakhulukazi ekuqaleni kobudlelwano, ukukhuluma ubusuku bonke. Uma uhlangana nomuntu nje, kuhle kakhulu ukuchitha ubusuku bonke nixoxa, nokwazana futhi nitshelana ngamava ahlukile futhi amnandi ababa nawo empilweni. Lokhu kungenye yezinto ezivame ukwenziwa njengezithandani futhi ezingakhohlakali.
Vele, ukuhamba ndawonye kungenye yezinto ongazenza nomlingani wakho okujatshulelwa kakhulu futhi okukhunjulwayo. Akudingekile futhi ube kude kakhulu. Kumele ubeke eceleni impelasonto ukuze wazi idolobha elisondele kodwa eliyindida. Ukuhlalisana kanye nesifiso sokufunda ngamasiko avela kwezinye izindawo kuvame ukudala ukwakhiwa kwezinkumbulo eziyigugu ebudlelwaneni.
Yize kubonakala kuwubuwula, uma ngemuva komsebenzi noma ube nezibopho eziningi ekupheleni kosuku ufuna ukuzola futhi ujabulele i-pizza enhle nokunethezeka kombhede, khohlwa ngomfutho owenzelwa ukudla ekamelweni futhi ukujabulele lokho kudla. Lona ngumdlalo wamahlaya ongathandani nhlobo ozoba ngenye yezinto othanda kakhulu ukuzenza nomlingani wakho.
Yabelana ngezinto zokuzilibazisa nezikhathi
Kumele kucatshangwe ukuthi kuzo zonke izithandani kufanele kube nokuthanda okuvamile. Abanye bathi uma umbhangqwana wehluke kakhulu komunye, ungasebenza njengoba behlukaniswe ngamapali. Kodwa-ke, lapho kukhona uchungechunge lwabaningi ngokufana, kungaba lula kakhulu ukudala ulwazi nokwabelana ngezikhathi. Enye yezindlela zokwabelana ngokuthanda futhi kamuva ube nokuhlangenwe nakho okufanayo ukufunda incwadi efanayo. Ukufunda incwadi efanayo ngeke kukhulise amazinga amasiko akho kuphela, kepha kuzokuvumela nokuthi nazane kwelinye izinga. Uma bobabili sebeyiqedile incwadi kuyalulekwa ukuthi uhambe ntambama uyoxoxa ngayo bese uthola imibono yomunye. Kwenye yezinhlelo ezinhle kakhulu zokwenza njengombhangqwana.
Ubuchwepheshe bulethe induduzo enkulu emibhangqwaneni. Ngazo zonke izinsiza zobudala bedijithali obukhona bokubuka ithelevishini, okuwukuphela kwento okudingeka uyenze kulokhu kusho uchungechunge enifuna ukulibona nobabili futhi nilabe ihora nsuku zonke ukuze nilulandele. Uma kukhulunywa ngokwenza imarathon yochungechunge oluthandayo, akukufanele izahluko ezihlukile. Lokho kungenye yezinto okufanele zenziwe ndawonye.
Amasiko nawo abalulekile ebudlelwaneni. Kukwabelana ngokuhlangenwe nakho nomuntu omthandayo. Ukuze inyunyana iqiniswe ngokwengeziwe, ekuseni kwe NgoMgqibelo ukuya esikhungweni esinomlando noma ukuvakasha emnyuziyamu. Olunye lwezinhlelo ezingenziwa njengombhangqwana futhi oluhlangana kahle kakhulu nokuvakashela eminyuziyamu ukuqeda usuku ngekhofi elimnandi.
Izinto ongazenza nomlingani wakho: yakha ukwethembana
Ukwethenjwa okuyisikhali esihle kakhulu sokuqinisa ubudlelwano. Ngakho-ke, ukutshela umlingani wakho ngemiphumela yaso esondelene kakhulu kungasetshenziselwa ukwakha okuthile okuhle kakhulu. Ebudlelwaneni, ukuthembana kubaluleke kakhulu. Uma kunokuthile umlingani wakho angakwazi namanje futhi ucabanga ukuthi kufanele ukwazi, kungcono ukuthi ubatshele. Lokhu kuzosiza ukudiliza imigoqo futhi sazane ngokujulile.
Ukuzivocavoca ndawonye kungaba umqondo omuhle noma ngabe abaningi bengacabangi kanjalo. Kujwayelekile ukubona eminye imibhangqwana iya ejimini ndawonye kanti abantu bathi kungcono ukuthi bazihlukanise ukuze bangenzi konke ndawonye. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi phakathi kwalaba ababili abangaba nabo isiyalo ngokwehlukana kwabo abakwazi ukuba naso. Kumele futhi usizakale ukukhuthazana ukuqeqesha kanzima nokusizana ukusetha imishini nemigoqo.
Phakathi kwezinto okufanele uzenze nomlingani wakho esishilo, sibonise ukuthatha uhambo oluncane. Okufanayo kuthatha uhambo olude. Bazohamba nohambo lokuya endaweni ekude futhi bafa ukuhlangana. Akukho mkhawulo, kufanele wenze isabelomali, ukhethe ihhotela futhi ujabulele lo mbhangqwana nohambo. Imvamisa lolu hlobo lohambo lokho babopha okuningi kakhulu ngoba bazohlala isikhashana endaweni engeyona indawo yokududuza. Ngale ndlela, endaweni ekude ngokuphelele, ninomunye nomunye kuphela. Lokhu kusiza kakhulu ukuqinisa izibopho zokwethembana.
Izitolo zokudlela ezihle kakhulu bekulokhu kuyisinqumo esihle phakathi kwezinto ongazenza nomlingani wakho. Akudingeki ukhathazeke ngezindleko ezizokwenziwa, kepha gxila ekunambitheni izitsha ezihlwabusayo, iziphuzo ze-flirty nokubabaza isimo esingafani neze nesakho. Lolu hlelo lungaxhunywa nakho konke okusele kwe- ubusuku bendawonye beziphuzo nezingxoxo zasebusuku kuze kuse. Ukusa ekuseni yisikhathi esihle sokujabulela nabashadikazi. Kungenye yezinto ezenziwa imibhangqwana futhi ngubani ozokwenza ukuthi umjoyine kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezinto ongazenza nomlingani wakho nokuthi yiziphi izinzuzo ongaba nazo kuwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Izinto ongazenza nomlingani wakho